२०७८ बैशाख, १९
वैशाख १९, काठमाडौं ।तीन ओटा कम्पनीको शेयरमूल्य आइतवार उच्च दरले वृद्धि भएको छ । सबैभन्दा बढी महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
त्यसैगरी, विशाल बजार कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९८ प्रतिशत र सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
यी तीन ओटै कम्पनीको शेयरमा विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको हो महिला लघुवित्तको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू. ३ हजार ४३७, विशाल बजार कम्पनीको रू. ५ हजार ६०८ र सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको शेयरमूल्य रू. ३९९ पुगेको हो ।
महिला लघुवित्तले आइतवार तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको नाफा उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको सार्वजनिक गरेको छ । सोही कारण पनि शेयरमूल्य बढेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य कारोबारमा आएको तेस्रो दिनदेखि सर्किट लेबलमा वृद्धि हुँदै आइरहेको छ ।
सिंगटी हाइड्रो इनर्जीको शेयर कारोबारमा आएको आज तेस्रो दिन हो । शेयरमूल्य बढेसँगै यस कम्पनीको शेयरमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । सोही कारण विक्रेताभन्दा क्रेता धेरै भएकाले शेयर मूल्यमा वृद्धि भएको हो ।